MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 868
>Moe Sel Nay - Existence
>Tu Maung Nyo - ဖိတ်ခေါ်လို့သွားတာမဟုတ်ဘူး၊ မှတ်ပုံတင်ဖို့သွားရတာ
> ငယ်တော့ ဒီမိုကရက်၊ ကြီးတော့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် မောင်ရစ် မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ ဗမာပြည်မှာတုံးက ကြားဖူးတာက ငယ်တော့ ကွန်မြူနစ်၊ ကြီးတော့ အရင်းရှင်ဆိုလားပဲ။ လူငယ်ဘ၀က စွန့်စားလှုပ်ရှားခဲ့တုံးမှာ အဲဒီတုံးက ခေတ်စားတဲ့...
> မတ်လ ၃ ရက်က ဗုံး၊ လှည်းတန်းဘတ်စ်ကားဂိတ်ပျက်စီး မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများက လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီးရှိ ဘတ်စ်ကားဂိတ်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၏ အပျက်အစီးများကို ရှင်းလင်းနေစဉ်။ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများက မြို့ထဲက...
> ပခုက္ကူမြို့တွင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါပိုးကြောင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ် ၀င်းမြတ် မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ ပခုက္ကူမြို့တွင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဖြင့်သေဆုံးသွားသော ကိုရင်လေးတစ်ပါးကို အကြောင်းပြုပြီး မြို့ခံများအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကာ ကာကွယ်ဆေးများသောက်သုံးခြင်း မျက်နှာဖုံးစည်းများ ၀တ်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော တပတ်ခန့်က...
> Cartoon Maung Yit – Among so-called Media People, Pro-Junta Group & Oppositions, Free Press is not so free...
>Thit Kaung Ein – Sushi Poem
> ဆူရှီသမားလိပ်တဲ့ ကဗျာ သစ်ကောင်းအိမ် မတ် ၄၊ ၂၀၀၉ မြက်ကလေးတွေ တပင်ချင်းစီက ပရေရီမြက်ခင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့တာ အဲဒါ ငါဘာသာငါ လျှောက်ပြောနေတာ ရှင့်သတင်း နားထောင်ဖို့ ရေဒီယိုထဲ ဓာတ်ခဲထည့်ရမယ် အရပ်ထဲ...
>Than Soe Hlaing – Sanction on Burma – Question Revisited
> စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် မြန်မာစီးပွားရေး ဘာလဲ ဘယ်လဲ သန်းစိုးလှိုင် မတ်လ ၄၊ ၂၀၀၉ အပိတ်တခု အပြော နှစ်မျိုး ရန်ကုန်မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံးဟု ခေါ်ဆိုသည့် လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ထဲ ရှိစက်ရုံတရုံ၊ အထည်ချုပ်...
>Zaw (Pyinmanar) – Pyinmanar Metta Zar
> ပျဉ်းမနားမေတ္တာစာ ဇော် (ပျဉ်းမနား) မတ် ၄၊ ၂၀၀၉ သူငယ်ချင်း … ပုပင်း အင်းတောင်၊ ညောင်ရမ်းနောင်တဲ့တစ်စောင်တစ်ဖွဲ့ ၊ ပြောကြတယ်။ ဘာရမလဲ ရေလွဲမြစ်မနား၊ ဒါ...
> ကဗျာဆရာ ဇော်(ပျဉ်းမနား) ကွယ်လွန်ခြင်း ၉ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေး မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၄၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၊ ၂၀၀၉ က ရွှေတိဂုံဘုရား...
> ရန်ကုန်မြို့တွင် တနေ့တည်း ဗုံး နှစ်ကြိမ်ကွဲ အေပီသတင်း မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့ စံတော်ချိန်၊ မတ် ၃၊ ညနေ ၉ နာရီ ခွဲက မြေနီကုန်းလမ်းဆုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး...
> တော်ဘုရားလေး စာပေဆု မိသားစုနေအိမ်မှာ ကျင်းပရ မိုးမခအထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ခု ရက်နေ့မှာ တော်ဘုရားလေး စာပေဆုပေးပွဲကို စီးတီးစတားဟိုတယ်တွင်ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း...
> ခရီး ……ဒေါင်းရိုင်းမတ် ၃၊ ၂ဝဝ၉ ပန်းပွင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အခေါ်လွှတ်လိုက်တော့ကျနော်လာခဲ့ပြီ ……..။ မုန်တိုင်းနက်တွေဟာလိုဏ်ခေါင်းဖြူတွေကိုဆေးဆိုးတဲ့အချိန် …..။ ပင်လယ်နီဟာ ကွဲဖြာထွက်တန်ခိုးရှင်ရဲ့ မြင်းဖြူတော်တွေကို စီးပြီး …..ဖြတ်သန်းခဲ့သူတွေလိုပေါ့ ……. ကျနော် လာခဲ့တယ်ကျနော့်ကို ဝိုင်းနေတဲ့တိမ်ထု တိမ်တောင်တွေကို...
> မျှော်လင့်ချက် ဂျူနီယာဝင်း (အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ၂၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉) မတ် ၃၊ ၂၀၀၉ Hope – George Frederick Watts(1817-1904) George Frederick...
> ဒီလ သူ ဘာဖတ်နေသလဲ၊ မဂ္ဂဇိန်ဒိုင်ဂျက် မာတိကာသစ် မဂ္ဂဇိန် သာဂိ မတ် ၂၊ ၂၀၀၉ စာအုပ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူများညွှန်းတာတွေလည်း ဖတ်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအတွက်...
> New year message from Burmese Junta to its neighborsApril 14, 2008(Recollection …) Cartoon Beruma No tags for this...
> မြစ်ကြီးနား ၇ ညံစီ မတ် ၂၊ ၂၀၀၉ ကြောက်မှန်ကြည့်သူတွေ အုတ်ရိုး အိမ်အိုနား ခဏ ခဏ မလာစေနဲ့ကွယ်။ ပလတ်စတစ်အပုံထဲကနေ ခုန် ခုန် ထွက်နေရတဲ့ လမင်းခင်ဗျာ။ သူငယ်ပြန်နေတာ...
> အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ သာကေတ (၁) မဲဆန္ဒနယ်အမတ် ဦးမောင်မောင်လတ် (ခ) ဒေါက်တာလှိုင်နီ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ် မိုးမခအထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၁၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ကုသဆောင်မှာ ၁နှစ်နဲ့ ၉...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၆)“ထူးမခြားနား” သီချင်းခန့်၏ နောက်ဆက်တွဲမာမာအေးမတ် ၁၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ...
> ယနေ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ပုံရိပ် သန်းစိုးလှိုင် မတ်လ ၁၊ ၂၀၀၉ လောင်စာဆီဈေး အကျနဲ့ အကြပ်၊ မြန်မာငွေလဲနှုန်း မြင့်လာ၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ၀ယ်အား သိသိသာသာ ကျဆင်း၊ နေ့စဉ်...
> ညီလေးအတွက် မောရသုတ် ကြည်မောင်သန်း၊ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ညီလေး ကြည်မောင်သန်း ညီလေး ငါတို့ ဘယ်တော့မှ ထွက်မပြေးဘူး ထွက်မပြေးဘူး ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ သစ္စာ ညီလေး...
> နေ့တိုင်းမျှော်နေရအုံးမယ်ကျော်ကျော်ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ လုပ်နေကျ အရာတခုခုကို နေ့စဉ်လုပ်နေရင်းကနေ မသိမသာ အဲဒီဟာကို စွဲလမ်းမှန်းမသိ စွဲလမ်းသွားတတ်တယ်။ စွဲလမ်းသွားပြီ ဆိုလဲ ဖြတ်ဖို့ ပြန်ပြင်ဖို့ကလည်း တော်တော်ခက်တယ်။ ဆေးလိပ်စွဲတယ်၊ အရက်စွဲတယ်၊ ကွမ်းယာစွဲတယ်...
> အာဆီယံအစည်းအဝေးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက မြန်မာ အမျိုးသမီးတဦးကို ၀င်ခွင့်မပြုမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၃မတ် ၁၊ ၂၀၀၉ မခင်ဥမ္မာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ အကြပ်ကိုင်မှုကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)က လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ စိုက်ဆင်းလေပြင်းသတင်း မမှန်ဟု မိုးဇလက ငြင်း။ အဝေးပြေးကားလုပ်ငန်းများ ကျောင်းပိတ်ချိန်ကို မျှော်။ လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့...
> 9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part5Daw Mar Mar Aye No tags for this...
Page 868 of 939«1...866867868869870...939»